Nikiakiaka tao amin'ny TMC i Yann Barthès, nanameloka mivantana azy ireo ny fanolanana
By bryanekobe Last nohavaozina Oct 12, 2020
Ity alakamisy 1 ityer Oktobra, i Yann Barthès dia nanome toky tanteraka ny mpitarika ny TNT sy ny TMC miaraka amin'ny fanontana "Quotidien" izay niresaka momba ny Uyghurs. Ity farany izay iharan'ny famoretana mahery setra any Shina.
Nisahotaka i Frantsa ny amin'ny nanjo ny Uyghurs
Ho an'ny "Quotidien" an'ny 1er Tamin'ny volana oktobra lasa teo, Fetim-pirenena sinoa, Yann Barthès dia nanapa-kevitra ny hitodi-doha mankany Shina. Fotoana ahafahan'ny mpanao gazety miteny sy manome vaovao vokatry ny onjam-panohanana manodidina ny Uyghurs.
Raha ny marina dia maherin'ny 60 ny Uyghurs iharan'ny tsy fahasalamana ao amin'ny toby fitanana ao Shina. Ankoatr'izay, misy vondrom-piarahamonina silamo lehibe izay iharan'ny fanandevozana. Manoloana ny zava-misy dia nandray andraikitra tamin'ny tranokala i Raphaël Glucksmann hanambarana ny raharaha any Frantsa. Araka izany dia te hohenoina izy ary hiaro an'io antony io amin'ny filaharan'ny "Daily".
“Nikaroka vady olona izahay…. karazana fivarotan-tena ...
Arnold Schwarzenegger mahatsapa fa 'mahafinaritra' aorian'ny fandidiana ny fo -…
Ireo no fanjakana ratsy indrindra monina eto izao - BGR
VAKIO IZANY: emmanuel-macron-multiplies-the-escapeades-during-his-outings-Discover-the-most-to-date /
Nanoratra izy hoe: “Ny fiasa ho an'ny Uyghurs na dia toa lavitra be aza dia tokony hiasa ho antsika koa. Ity fanentanana ity dia manameloka ny heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona, ​​fa fanentanana ny karazan'izao tontolo izao tadiavintsika koa io. Te hanana tontolo misy antsika ve isika? multinationals mampiasa mpiasa Uyghurs noterena? Orinasa 83 no voarohirohy ».
Dilnur Reyhan, filohan'ny Institut Uyghur any Eropa, dia nilaza fa ny vehivavy no niharam-boina voalohany tamin'ity herisetra sy fanararaotana ity. Raha ny filazany, ny vehivavy Uyghur dia voaolan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fitondrana sinoa. Ankoatr'izay, fampielezan-kevitra momba ny hatsaran-tarehy revolisionera sy fampielezana sterilization no apetraka amin'izy ireo.
Yann Barthès, safidy ratsy? Mamela volom-borona izy.
Niompana tamin'ny Uyghurs ity fanontana ity, nanangona vahoaka mitentina 1,61 tapitrisa tapitrisa ny French, na 6,6%. Mpihaino izay nianjera be raha oharina tamin'ny Alarobia 30 septambra, izay 7,6%. Saingy, ny fantsona dia nihoatra ny TNT mpifaninana aminy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.cuisineza.com
Photos of original vestido de novia by Angelina Jolie - Video
Amin'ny sasakalina dia hatsangana i DJ Arafat; nilaza ny pasitera fa mahay izy - Video
“Nikaroka vady olona izahay…. karazana fivarotan-tena izany ”, hoy i Claire nibaboka…
Arnold Schwarzenegger dia mahatsapa fa 'mahafinaritra' aorian'ny fandidiana fo - olona
Michel Drucker: aorian'ny fiasan'ny fony, "tsara kokoa" ilay nampiantrano